Best Way to Buy Bitcoin With a Credit Card in March 2021 - Learn 2 Trade
Etu ị ga-esi jiri kaadi kredit zụta Bitcoin - Mụta Nduzi Azụmaahịa 2
Bitcoinzụta Bitcoin na kaadị kredit site na nkasi obi nke ụlọ gị adịtụbeghị mfe. Ọbụghị naanị na intaneti jupụta na ndị na-ahụ maka ịntanetị nke usoro isi dị ka FCA na - achịkwa - mana ị nwere ike itinye ego na usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị na-achọ iji kaadị kredit zụta Bitcoin - ị nwere chi ọma. Na nke ahụ kwuru, ọ bụghị ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ka a ga-atụle. Iji maa atụ, agbanyeghị na ha nwere ike ijide ikike achọrọ iji nabata ịkwụ ụgwọ kaadị kredit n'aka ndị bi na UK, ụgwọ a kpatara nwere ike ime ka nzụta ahụ dị oke ọnụ.
Ya mere, anyị ga-atụ aro ka ịgụọ onye ndu anyị dị omimi. Ọ bụghị naanị na anyị na-akọwa ụzọ kachasị mfe iji zụta Bitcoin na kaadị kredit, mana anyị na-egosikwa gị ndị ọrụ ntanetị kacha mma iji mee nke a.
Mara: N’agbanyeghi na onye ahia gi ahọpụtara nwere ike ọ gaghị akwụ gị ụgwọ iji zụta Bitcoin na kaadị kredit, onye na-ewe ihe nwere ike. Ọ bụrụ na ha emee, nke a nwere ike ịbụ n'ihi na onye na-ahụ maka kaadị kredit na-ele azụmaahịa ahụ anya dị ka ego enyere.
Zụrụ Bitcoin Na Ebe E Si Nweta Kaadị na Nkeji 5
Oge adighi igu akwukwo ndu anyi n'uju. Ọ bụrụ otu a, soro usoro ọkụ ọkụ akọwapụtara n'okpuru iji zụta Bitcoin iji kaadị kredit ugbu a.
➖ Kwụpụ 2: Bugote otu ID gị iji nyochaa njirimara gị
➖ Kwụpụ 3: Tinye nkọwa kaadị akwụmụgwọ na nkwụnye ego
➖ Kwụpụ 4: Tinye iwu 'zụrụ' ịzụta Bitcoin
➖ Kwụpụ 5: Jide Bitcoin gị ruo mgbe ị dị njikere ire
Bitcoinzụta Bitcoin Na Kaadị E Si Nweta - Ihe Ndị Bụ Isi
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta Bitcoin na kaadị kredit, ị ga-eji onye na-ere ahịa n'ịntanetị. Ndị a bụ nyiwe nke ndị ọzọ na-enye gị ohere itinye ego n'ọtụtụ akụ sitere na nkasi obi nke gị. N'elu mkpuchi dị ka Bitcoin, Ethereum, na Ripple - nke a nwekwara ike ịgụnye ebuka ọdịnala na mbak, ngwaahịa na indices. Ka o sina dị, n'agbanyeghị onye na-ere ahịa ị kpebiri iji, usoro ahụ ka bụ otu.
Dịka ọmụmaatụ, ị ga-ebu ụzọ chọọ imeghe akaụntụ. Nke a chọrọ ụfọdụ ozi nkeonwe, ọ na-ewekarị obere oge iji mezue. Ọzọ, ị ga-ahụ mkpa iji nyochaa njirimara gị. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-enye gị ohere ịme nke a na akpaghị aka site na itinye otu akwụkwọ paspọtụ gị ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala. Dị ka ndị dị otú a, ọ dịghị mkpa ichere ụbọchị na njedebe maka ụlọ ọrụ na-akwado mmadụ iji nyochaa akwụkwọ gị.
Ozugbo edoziri gị, ị ga-achọ itinye ego ụfọdụ. Ọ bụrụ na onye na-agba Bitcoin na ajụjụ na-akwado ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ, nke a ga-ekpuchi Visa na MasterCard. Banyere ụgwọ, nke a ga-adịgasị iche dabere na onye na-ere ahịa ị na-eji. Dịka ọmụmaatụ, nyiwe ndị ama ama dịka Coinbase na-akwụ ụgwọ 3.99% dị elu na ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ. Nke a dị nnọọ iche na ụdị nke eToro - ndị na-anaghị akwụ ụgwọ ego ọ bụla.
Mgbe agbakwunyere nkwụnye ego kaadị kredit gị na akaụntụ azụmaahịa gị - nke na-abụkarị nzi, ị nwere ike zụta Bitcoin na pịa bọtịnụ. N'ọtụtụ oge, ị ga - abanye ọnụ ọgụgụ Bitcoin ịchọrọ ịzụta na paụnd na pence, ma kwenye na iwu ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa na-achịkwa, ị nwere ike ịchekwa mkpụrụ ego gị n'elu ikpo okwu ruo mgbe ị dị njikere ire.
Uru na ọghọm nke iji Kaadị E Si Nweta Zụta Bitcoin
A na-agbakwunye ụgwọ ịkwụ ụgwọ na kaadị akwụmụgwọ gị ozugbo
Ndị na-ere ahịa na-akwadokarị Visa na MasterCard
Ihe ntanetị kachasị mma anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla iji jiri kaadị akwụmụgwọ
A ghaghị ịhazi ndị na-ere ahịa Bitcoin ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịnabata ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ
Mgbe ị na-etinye ego na ntinye ego gị, weghachi otu kaadị akwụmụgwọ ahụ
Otutu nke broka Bitcoin ịhọrọ
Usoro ntinye ego na njedebe kwesịrị iwe karịa minit 10-15
A na - ejikarị ókè eme ihe mgbe ị na - eji kaadị akwụmụgwọ
Ndị na-ere ahịa na-achịkwa ga-enyocha njirimara gị
Nkwado maka kaadị akwụmụgwọ AMEX dị obere
Gwọ Bitcoinzụ Bitcoin na Kaadị E Si Nweta
N’otu aka, iji kaadị kredit zụta Bitcoin dị mma karịa. Ọzọkwa, ị ga-eritekwa uru na usoro nkwụsịtụ na-enweghị ntụpọ ma a bịa n'ịchụ ego Bitcoin gị. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ụgwọ ịchọrọ iji tụlee tupu gị adaba. Ọbụghị naanị na nke a gụnyere ụgwọ akwụ ụgwọ-akwụ ụgwọ, mana ụgwọ azụmaahịa, kwa.
Dị ka ndị dị otú a, gbaa mbọ nyochaa ihe ndị a tupu i jiri kaadị kredit zụta Bitcoin.
Fọdụ, ma ọ bụghị ihe niile, Bitcoin broka ga-akwụ gị ụgwọ ego iji jiri kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụrụ na ha emee, nke a ga-abịa n'ụdị ego na-agbanwe agbanwe. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ka ị na-etinyekwu ihe, otú ahụ ka ị ga-atụ anya ịkwụkwu.
Otu onye na-ere ahịa karịsịa nke a maara nke ọma maka ịkwụ ụgwọ ego nkwụnye ego dị elu bụ nke Coinbase. Dịka e kwuru n’elu, ikpo okwu a ga-ebo gị onye butere 3.99% iji kaadị akwụmụgwọ mgbe ịzụrụ Bitcoin.
Ka anyị kwuo na ịchọrọ ịzụta worth 2,000 uru nke Bitcoin na Coinbase
Tochọrọ iji kaadị akwụmụgwọ Visa gị, yabụ ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ 3,99%
Nke a pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ £ 79.80 na ụgwọ
Dị ka ndị dị otú a, ị ga - enweta worth 1,922 uru nke Bitcoin ọ bụ ezie na ebubo kaadị akwụmụgwọ gị maka £ 2,000
N'ụzọ dị oke mkpa, nke a kpatara na anyị na-akwado ndị na-ere akwụkwọ Bitcoin na-enye gị ohere itinye ego n'efu. Emechakwa, ị nwekwara ike ịkwụ ụgwọ ego site na mgbasa ma ọ bụ site na ọrụ azụmahịa.
Ego na-aga n'ihu ego
Dabere na onye nyere gị kaadị na kredit, ị nwekwara ike kwụọ ụgwọ 'ego tupu ịga ego'. Dị ka aha ya na-egosi, nke a bụ ego ebubo mgbe ị na-eji kaadị akwụmụgwọ gị iji wepụ ndọrọ ego igwe ndọrọ ego. Ezie na ọ bụ eziokwu na ị naghị ewepu ego ndọrọ ego ATM, ụfọdụ ụlọ ọrụ kaadị kredit gụnyere ụdị azụmahịa ndị ọzọ na ọnụ ụzọ mbata ego.
Ihe atụ gụnyere inyefe ego n'ịntanetị, ego ịgba chaa chaa na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ị kwesịrị ịtụ anya ịkwụ ụgwọ na mpaghara nke 3% nke ngụkọta azụmahịa bara uru. Dịka ọmụmaatụ, ịzụta Bitcoin 2,000 Bitcoin ga-efu gị £ 60. Ọzọkwa, n'adịghị ka ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ, mmụba ego nwere ọmụrụ nwa etinyere n'otu ntabi anya.
Ndụmọdụ anyị ga-abụ ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ kaadị kredit gị tupu oge eruo, naanị iji jide n'aka na azụmahịa ahụ agaghị eweta ụgwọ ego n'ihu.
On top of nkwụnye ego ụgwọ na a ego advance, ị dịkwa mkpa ka inyocha ma ma ọ bụ gị họọrọ ore ahia ebubo a trading ọrụ. Ọzọkwa iji Coinbase dị ka ihe atụ mbụ anyị, onye na-ere ahịa ebubo 1.5% oge ọ bụla ịzụrụ ma ree Bitcoin. Mgbe ịzụrụ £ 2,000, nke a ga-abụ £ 30. Nke a ga - ewepu ego nzụta gị, na - ahapụ gị £ 1,970.
Ga-achọ ịkwụ ụgwọ 1.5% mgbe ị na-erite na ego na gị Bitcoin ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na iresị Bitcoin mgbe pọtụfoliyo gị ruru £ 4,000, ị ga-akwụ £ 60.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ụfọdụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-enye gị ohere ịzụta ma ree BItcoin na ntọala enweghị ọrụ. N'ezie, ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa na anyị akwadoro na ibe a na-eme nke ahụ. Dị ka ndị dị otú a, ị na-eguzo iji belata ụgwọ ahịa gị site na anya.
Ikpeazụ ego na ị chọrọ ile anya maka bụ mgbasa. Nke a bụ ihe dị iche na ọnụahịa 'zụrụ' nke Bitcoin, yana nke 'ere' ahịa. Mgbe ị gbakọọ ihe dị iche na pasent okwu, nke a bụ ego ị na-akwụghị ụgwọ na-akwụ iji tinye ahịa gị.
Onu ahia 'ezigbo' nke Bitcoin bu £ 10,000
Na ore ahia awade a 'Buy' price of, 9,900
Ọnụ 'ere' ruru £ 10,100
Ihe dị iche n'etiti ọnụahịa abụọ ahụ na ọnụahịa ahịa bụ £ 100
Nke a ruru 1%, nke pụtara na mgbasa bụ 1%
Yabụ, ọ bụrụ na ịzụta Bitcoin, ị ga-eme opekata mpe 1% maka uru naanị iji mebie. Yabụ, ọ bụrụ na ị zụrụ Bitcoin wee ree ya ozugbo, ị ga-eme ya na mfu 1%. Ka o siri dị, mgbasawanye dị elu, ka ọ na-efu ọ bụla na-efu gị ịzụ ahịa.
Nke a bụ ya mere anyị ji akwado ndị na-ere ahịa na-agbasa mgbasa.
Ọ bụ ezie na anyị elekwasịla anya na ntuziaka anyị na usoro ịzụrụ, ọ dịkwa mkpa ka ị tụlee ụfọdụ gbasara ịchụ ego gị. A sị ka e kwuwe, anyị chere na ị na-azụ Bitcoin n'ihi na ị chere na ọ ga-abawanye uru na ogologo oge.
Udo nke ị nwere ike ime nke a na kaadị akwụmụgwọ gị ga-adabere na ụdị onye na-ere ahịa ị na-eji, yana otu ị chọrọ isi chekwaa mkpụrụ ego gị. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eji a na-achịkwa ore ahia dị ka eToro, ọ dịghị chọrọ iji wepụ gị ego si. Nke a bụ n'ihi na ikpo okwu nwere njikwa nchekwa achọrọ iji chebe ego gị.
Na njedebe nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa na-enweghị iwu - nke anyị ga - adụ ọdụ megide, ị ga - akacha mma ịdọrọ mkpụrụ ego gị gaa obere akpa. Ọ bụghị naanị na nke a pụtara na ị bụ 100% na-ahụ maka idobe ego gị ọfụma, mana ị ga-ahụ na usoro iwepụ bụ nnukwu ihe siri ike.
Dịka ọmụmaatụ, usoro njedebe na njedebe gụnyere:
Bitcoinzụta Bitcoin na kaadị akwụmụgwọ gị
Dọrọ Bitcoin na obere akpa
Idobe Bitcoin gị na obere akpa ruo mgbe ị dị njikere ire
Mgbe ị dị njikere ire, ị kwesịrị ịnyefe mkpụrụ ego na onye na-ere ahịa n'ịntanetị
Ikwesiri igbanwe Bitcoin maka pound
Kwesịrị ịwepụ mkpụrụ ego ahụ na akaụntụ akụ - dị ka usoro iwu na-egbochi ịchụ ego
Nke a dị nnọọ iche na iji onye na-ere ahịa achịkwa dị ka eToro. Dịka ọmụmaatụ, ozugbo ịzụrụ Bitcoin gị, ịnwere ike ịhapụ ya na onye na-ere ahịa ruo mgbe ị dị njikere ire. Mgbe ị bụ, ịnwere ike ịgbanwe ya na ego ịkwụ ụgwọ na pịa bọtịnụ.
N'ikpeazụ, ị chọrọ ịrịọ nkwụghachi na otu kaadị kredit ahụ ị na-emebu nkwụnye ego. Nwere ike ime nke a n'ihi na ị jirila ego nweta ego na onye na-ere ahịa, yabụ ihe niile dị n'ime nnukwu iwu iwu mgbochi ego nke UK!
Họrọ onye na-ere ahia iji zụta Bitcoin Jiri Kaadị akwụmụgwọ
Ya mere ugbu a na anyị ekpuchiwo ihe ndị dị mkpa dị ka nkwụnye ego, iwepụ, na ụgwọ - anyị ga-atụlezi ins na outs nke ịhọrọ onye na-ere ahịa. A sị ka e kwuwe, e nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa Bitcoin na-anabata kaadị akwụmụgwọ, yabụ ịmara ebe ikpo okwu ịhọrọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka.
Dijitalụ Nhọrọ Nhọrọ ahia kachasị mma
Dị ka ndị dị otú a, jide n'aka na ị gụọ ntuziaka ndị a tupu ịbanye na ikpo okwu ọhụrụ.
Mara: Ọ bụrụ n ’ị nweghị oge iji bulie onye na-ere ahịa na onwe gị, anyị ga-atụ aro ịpịgharị na ala nke ibe a. N'ime ime nke a, ị ga - ahụ ndị ahịa Bitcoin dị afọ ise kacha mma nke 2021 - nke edobere ma nabata kaadị akwụmụgwọ.
Dịka anyị kwupụtara na ntuziaka anyị rue ugbu a, ị kwesịrị iji naanị onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke a na-achịkwa. Nke a kwesịrị ịgụnye òtù ikikere dị ka UK's FCA, CySEC na Cyprus, na ASIC na Australia.
N'akụkụ ọtụtụ usoro nchebe ndị ọzọ, nke a ga-ahụ na edobere ego gị na akaụntụ ụlọ akụ iche. Dịka, ọ bụrụ na nke kachasị njọ mere na onye na-ere ahịa na-aga, itinye ego gị kwesịrị dịrị mma.
Kaadị akwụmụgwọ akwadoro
Kwesịrị ịkwado na onye na-ere ahịa Bitcoin ị họọrọ na-akwado onye na-ewepụta kaadị gị. N'ọtụtụ oge, ndị na-ere ahịa ga-enwe ikike ịnabata Visa na MasterCard. Ọ bụ ezie na ọ dịkarịsịrị obere, ụfọdụ ga-enye nkwado maka AMEX. Na nke ahụ kwuru, a gwara gị ka ịlele nke a tupu imepe akaụntụ.
Anyị ekpuchilarị ụgwọ na ntuziaka a, yabụ ị kwesịrị ịma ihe ị ga-ele anya. Ka o sina dị, nke a kwesịrị ịmalite site na usoro nkwụnye ego n'onwe ya, dị ka nyiwe dị ka Coinbase ga-akwụ gị ụgwọ 3.99% maka obi ụtọ iji kaadị akwụmụgwọ.
Mgbe nke ahụ gasị, chọpụta ma ikpo okwu a na-ebo ebubo ọrụ na azụmaahịa Bitcoin. N'ikpeazụ, jide n'aka na ịlele asọmpi nke mgbasa. Echefula, nke a bụ ihe dị iche n’etiti ịzụta na ire ọnụ ahịa nke ngwa ahịa ahụ.
Mostzọ kachasị adaba iji chekwaa ego Bitcoin gị bụ idebe ya na onye ahia ị họọrọ. Agbanyeghị, ịkwesịrị inyocha ihe na-echebe usoro ikpo okwu na mbụ. Ọ bụrụ n’ị na-azụta Bitcoin n’ụzọ ọdịnala, gbaa mbọ hụ na onye na-ere ahịa na-echekwa ego na nchekwa.
Nke a pụtara na obere akpa ejikọghị na ịntanetị. Site na nke a, ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta Bitcoin n'ụdị CFD (Nkwekọrịta-maka-Iche), ịkwesighi ichegbu onwe gị maka nchekwa. Nke a bụ n'ihi na akụ na ụba apụtaghị, ebe ọ bụ naanị ihe ego ị na-etinye na ya.
Na usoro nke ịchekwa akaụntụ gị, anyị na-ahọrọ ndị na-ere ahịa na-enye 2FA. Nke a bụ ebe achọrọ ka ị banye PIN pụrụ iche nke ezitere na ekwentị gị oge ọ bụla ịchọrọ ịbanye na akaụntụ gị brokerage.
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịzụrụ ma ree Bitcoin na obere oge, mgbe ahụ ị ga-achọ ịtụle onye na-ere ahịa CFD. N'ime ime nke a, ị ga-ahụ ọtụtụ ngwaọrụ nke na-agaghị adị na onye na-ere ahịa ọdịnala. Dịka ọmụmaatụ, CFDs na-enye gị ohere itinye mpempe akwụkwọ mgbe ị na-azụ Bitcoin.
Nke a pụtara na ị nwere ike ịzụta karịa Bitcoin karịa nke ị nwere na akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ị si UK (ma ọ bụ European Union) mgbe ahụ ị ga-etinye aka na ntinye nke 2: 1 mgbe ị na-ere cryptocurrencies. Platformsfọdụ nyiwe na-enye usoro ịgbazigharị na nke a site na ịnye ego dị ka 'ọtụtụ'.
Ka o sina dị, nyiwe CFD na-enye gị ohere ịgbara Bitcoin obere oge. Nke a pụtara na ị na-atụgharị uche maka ọnụego Bitcoin n'ọdịnihu ga-agbadata.
N'ikpeazụ, anyị ga-atụ aro ịgagharị ngalaba ọrụ ndị ahịa Bitcoin. Nke a kwesịrị ịgụnye ụdị ụdị ọwa nkwado - dị ka nkata ndụ, ekwentị, ma ọ bụ email. N'otu aka ahụ, ị ​​kwesịrị ịlele iji hụ awa ole ndị ọrụ nkwado na-arụ ọrụ.
Etu ị ga-esi jiri kaadi kredit zụta Bitcoin
🥇 1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Họrọ a Broka nke Na-akwado Ebe E Si Nweta kaadị
Nke mbu, ikwesiri ichoputa ikpo okwu na ntanetị nke na - abụghị naanị na - ere Bitcoin, ma na - enye gị ohere iji kaadị akwụmụgwọ zụta ya. Iji mee nke a, nanị soro ntuziaka ndị anyị tụlere na ngalaba dị n'elu.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịnweghị oge iji chọpụta ebe ikpo okwu na kama ịchọrọ ịzụta Bitcoin ugbu a, gbadaa ma nyochaa ndị na-ere ahịa edepụtara na ala nke ibe a. A na - achịkwa ndị na - ere ahịa anyị ọfụma site na ahụ dịka FCA na CySEC, ha niile na-akwado kaadị akwụmụgwọ, ha niile na-enyekwa ego ịsọ mpi.
Ndị ahịa niile na-achịkwa ga-arịọ gị ka ịmepe akaụntụ tupu ị nwee ike iji kaadị kredit zụta Bitcoin. Nke a na-ewe nkeji ole na ole, ọ ga-achọkwa ịnweta ozi gbasara onwe gị.
Ozugbo ị meghere akaụntụ ụlọ ahịa gị, ị ga-ahụzi njirimara gị. Nwere ike ịme nke a site na ịbudata otu akwụkwọ ikike ngafe gị ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala.
Nzọụkwụ 3: Jiri Kaadị E Si Nweta Gị tinye ego
Ugbu a emeghela ma gosipụta akaụntụ imebi ụlọ gị, ị nwere ike itinye ego na kaadị akwụmụgwọ ugbu a. Gaba na peeji nke ịkwụ ụgwọ, wee họrọ onye na-ewepụta kaadị gị (Visa, MasterCard, wdg)
Mgbe ahụ, tinye ihe ndị a:
Ọnụ ego na GBP ịchọrọ ịkwụnye
16-nọmba nọmba kaadị akwụmụgwọ
3-nọmba CVV (azụ nke kaadị)
N’ọnọdụ ka ukwuu, a na-agbakwunye kaadị nkwụnye ego na akaụntụ azụmaahịa gị ozugbo. Dịka, ị nwere ike ịga n'ihu na ịzụta Bitcoin gị.
N’ụzọ yiri nke a na ngwaahịa ndị ọzọ dịka ọla edo, ọla ọcha, mmanụ, na gas - ọnụahịa Bitcoin dị ọnụ ahịa na dollar US. Dịka, onye na-ere ahia gị nwere ike igosipụta njikwa akaụntụ gị na USD.
Ozugbo ị nọ na peeji ahịa maka BTC / USD, lelee maka igbe igbe. Iji mezue nzụta gị, ị ga-aba ihe ndị a:
Ebe obibi: Nke a bụ ego nke Bitcoin ịchọrọ ịzụta. Dịka e kwuru n'elu, ị nwere ike ịbanye nke a na USD.
Oke / Order ahịa: Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta Bitcoin na ọnụahịa ahịa ugbu a, họrọ usoro 'ahịa'. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịbanye n’ọnọdụ a kapịrị ọnụ, gbanwee nke a ka ọ bụrụ njedebe ịgba. N'ime ime nke a, a ga-eme iwu gị naanị ma ọ bụrụ na mgbe eburu ọnụahịa ahụ.
leverage: Imirikiti ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-enye gị nhọrọ nke itinye leverage. Ọ bụrụ na ha emee, ị ga-ahụ ya edepụtara n’ime igbe ịtụ. Ekwesịrị itinye akara a dị ka otutu, dị ka 2x.
Kwụsị-Loss Order: Ọ bụrụ na ịchọrọ ichebe onwe gị pụọ na nnukwu ọghọm, ịkwesịrị ịwụnye usoro nkwụsị-nkwụsị. Site na ịkọwa ọnụahịa, a ga-emechi iwu gị na akpaghị aka mgbe ọnụahịa ahụ malitere.
Were-Uru iji: N'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta ego na uru gị mgbe Bitcoin na-abawanye site na ọnụọgụ ụfọdụ, ịnwere ike ịtọ nke a site na iji ego na-enweta ego.
Ozugbo i mejupụtara usoro a dị n'elu, mezue nzụta gị site na ịpị bọtịnụ 'ịzụta'.
Top 5 Broka iji kaadị kredit zụta Bitcoin
Njikere ịzụta kaadị Bitcoin na kaadị kredit ugbu a, mana ịnweghị oge iji chọọ onwe gị? Ọ bụrụ otu a, lelee ndụmọdụ ise kacha mma anyị depụtara n’okpuru.
eToro bụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido zuru oke n'ụwa nke Bitcoin na itinye ego n'ịntanetị. N’ụzọ dị oke mkpa, ịnwere ike iji kaadị kredit iji debe ego na-akwụghị ụgwọ. A na-ebo ndị na-eweghachi ego ihe na $ 5, nke karịrị ezi uche.
eToro na-achịkwa nke ọma, yana ikikere sitere na FCA, CySEC, na ASIC. Ikpo okwu a bụkwa enyi na United States, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ihi iwu, ịgaghị enwe ike ire Bitcoin obere oge. N’akụkụ tụgharịa, eToro na-enye atụmatụ na-ewu ewu nke a na-akpọ Copy Trading. Nke a na - enye gị ohere idetuo ọrụ ndị ọrụ ndị ọzọ, nke ọzọ, dịkwa mma ma ọ bụrụ na ị na - amalite.
Na nchịkọta, ịzụta Bitcoin na kaadị kredit adịghị mfe. Naanị ị chọrọ ịchọta onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị, mepee akaụntụ, tinye nkọwa nke kaadị akwụmụgwọ gị, ọ bụ ya - ị zụrụ Bitcoin. Agbanyeghị, akụkụ aghụghọ nke usoro a bụ ịmara onye na-ere ahịa ọ ga - eji, ọ bụghị nke kachasị n’ihi na enwere ọtụtụ ịhọrọ site na 2021.
Site na nke ahụ, anyị nwere olile anya na site n'ịgụ ntuziaka anyị site na mmalite ruo n'ọgwụgwụ, ugbu a ị maara ọtụtụ usoro ị ga-achọ. Nke a kwesịrị ịgụnye ụgwọ nkwụnye ego, ọrụ, mgbasa, mgbasa ozi, nkwado ndị ahịa, yana leverage.
Nke kachasị, ịkwesịrị ijide n'aka na ahụ dị ka FCA na-achịkwa onye na-ere ahịa ị họọrọ. Iji nyere gị aka n'okporo ụzọ ahụ, anyị edepụtala ndị ahịa Bitcoin nyere akara ise dị ugbu a n'ahịa - ha niile na-anabata nkwụnye ego na nkwụnye ego.
Kedu ka m ga-esi jiri kaadị kredit zụta Bitcoin?
Kwesịrị ịchọta onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-anakwere nkwụnye ego kaadị akwụmụgwọ. Ozugbo ị mere, naanị mepee akaụntụ, nyochaa njirimara gị, ma tinye nkọwa kaadị akwụmụgwọ gị. Iji mezue usoro ahụ, melite iwu 'ịzụta'.
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe mgbe ị na-eji kaadị kredit zụta Bitcoin?
Imirikiti ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ga-emejuputa ego nkwụnye ego pere mpe mgbe ị na-eji kaadị akwụmụgwọ, nke na-anọkarị na £ 50- £ 150.
Kedu ihe kpatara m kwesiri iji bulite ID iji zụta Bitcoin na kaadị kredit?
Online Bitcoin agbanwe na-anabata kaadị akwụmụgwọ chọrọ iji chọpụta njirimara nke onye ọ bụla na onye ọ bụla na-eji ya na saịtị. Nke a na-achota na ndị na-ere ahịa na-agbaso usoro iwu mgbochi ego.
Kedu ego nkwụnye ego m kwesịrị ịkwụ mgbe m na-eji kaadị kredit ịzụta Bitcoin?
Fọdụ, ma ọ bụghị ihe niile, Bitcoin broka na-akwụ ụgwọ ego nkwụnye ego mgbe ha na-eji kaadị akwụmụgwọ. Gosiri dị ka pasent, nke a na-agbakọ megide nha nke nkwụnye ego gị.
Mylọ akụ m ọ ga-enye m ohere iji kaadị kredit m zụta Bitcoin?
Enwere akụkọ na mbido 2018 na ọtụtụ ụlọ akụ UK agaghịzi anabata nkwụnye ego kaadị akwụmụgwọ mgbe ha na-azụ Bitcoin n'ịntanetị. Agbanyeghị, ịnweghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa achịkwa, ebe ikpo okwu a na-ekwu ga-enye ọtụtụ puku akụ ndị ọzọ.
Enwere m ike ịlaghachi azụ na kaadị akwụmụgwọ m?
Ee, ozigbo ị gwụchagoro ego gị na Bitcoin na onye ị họọrọ, ị nwere ike weghachite nguzo gị na otu kaadị akwụmụgwọ ị jiri mee nkwụnye ego ahụ.
Nwere ike ire Bitcoin dị mkpụmkpụ site na iji onye na-ere ahịa CFD achịkwa ..